Mareykanka oo joojiyey kaalmadii Militari ee uu siin jiray dalka Masar ilaa inta laga dooranaayo xukuumad rayid ah – idalenews.com
Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyay qayb kamid ah Kaalmadi Milatari ee uu siin jiray Ciidamada Milatariga Masar, taasoo sanadkiiba gaari jirtay $1.3bn oo u dhiganta(£810m).
War kazoo baxay wasaarada arimaha dibada Mareeykanka, ayaa lagu sheegay in si KMG ah loo hakiyay qayb kamid ah kaalmada Milatari iyo Lacag sanad walbo lasiin jiray doowlada Masar.
Bayaanka kazoo baxay Wasaarada arimaha dibada Mareeykanka, ayaa lagu xusay in la hakiyay dhamaan Taageeradii Milatari iyo mida dhaqaale, ilaa iyo inta doowlad Rayid ah looga hirgalinayo dalka Masar.
Mareykanka ayaa bilaabay inuu dib u daraaseeyo kaamalada uu siin jiray Masar, kadib markii Ciidamada Milatariga Masar Afganbi ku sameeyeen Madaxweyne Morsi, sidoo kalena ay xasuuqeen dad shacab ah oo si nabad galyo ah u mudaaharaadayay.
“Waxaan joojinay dhamaan taageerada Milatari iyo mida dhaqaale ee aan siin jirnay Masar, ilaa iyo inta si dhab ah looga soo dooranayo Xukuumad Rayid oo Dimoqraadi ah” sidaa waxaa yiri afhayeen u hadlay wasaarada arimaha dibada Mareeykanka, oo lagu magacaabo Jen Psaki.
Xayiraadan uu Mareykanka ku soo rogay Masar, ayaa waxay gaareysaa malaayiin Doolarka Mareeykanka ah.
Washington, ayaa ku dhawaaqday ineey qorsheyneyso joojinta lacag cadadkeedu dhanyahay $260m, sidoo kale Mareeykanku waxa uu hakin doonaa Diyaaradaha Helicoptar-ka nuuca loo yaqaan Apache & qalab milaari oo kale, kuwaasoo sanad walbo uu siinjiray Milatariga Masar.
Tallaabadaan uu qaatay Mareeykanka, ayaa ah mid dharbaaxo weyn ku noqon doonta maamulka haatan haya tallada dalka Masar.
Khudbad uu Bishii hore M/weyne Obama ka jeediyay golaha amaanka, ayaawaxa uu aad u dhaliilay maamulka Milatariga Masar, waxaana uu ku eedeeyay ineey dhulka la galeen Nidaamka Dimoqraadiyada.
Dood Xiiso leh “Waxqabadka dowlada ee sanadkii tagey oo dhax mareysa, Dalxa,Yariisow, Sheikh Max’ed Yaasiin”